म PWM झिलमिलाना बारेमा जान्न आवश्यकता के? - 💡💻 आइरिस - Software for Eye protection, Health and Productivity 🛌👀
म PWM झिलमिलाना बारेमा जान्न आवश्यकता के?
PWM झिलमिलाना बारेमा सामान्य प्रश्नहरूको बारेमा द्रुत सोधिने प्रश्न, किनभने कहिलेकाहीं यो सबै जानकारी वहाँ भ्रमित हुन सक्छ.
तपाईंको प्रश्नको जवाफ छैन भने मलाई कतै लेख्न र म जवाफ र जवाफ यहाँ थप्नेछ 🙂
मेरो मनिटर झिलमिलाना के?
अधिकांश समय हो. यो तपाईंको मनिटर PWM वा डीसी मधुरो प्रयोग कि निर्भर.
PWM झिलमिलाना के हो?
केही निर्माता निगरानी चमक नियन्त्रण गर्न नाडी-चौडाइ मडुलन प्रयोग.
पल्स-चौडाइ मडुलन के हो?
को मूलतः र बन्द ब्याकलाइटद्वारा मा एलईडी खोल्दै.
किन यो अस्वस्थ छ?
आफ्नो आँखा जस्ता अनुबंध सुरु
र तपाईं आँखा तनाव र आँखा दुखाइ प्राप्त.
यो समाधान गर्न कसरी?
आफ्नो मनिटर हार्डवेयर चमक सेट 100% तपाईंको मनिटर बटन प्रयोग गरेर.
सबैभन्दा निगरानी अधिकतम चमक मा PWM प्रयोग नगर्नुहोस्.
मेरो चमक सेट गरिएको छ भने के 80%?
तपाईंको मनिटर PWM प्रयोग गर्न सक्छ
मेरो चमक सेट गरिएको छ भने के 50%?
मेरो चमक सेट गरिएको छ भने के 100%?
तपाईंको मनिटर शायद PWM प्रयोग छैन र तपाईं यो प्राप्त छैन र बन्द कुरा र आँखा तनाव.
छैन 100% चमक अस्वस्थ?
हो भने आफ्नो कोठा प्रकाश साँच्चै कम छ.
आँखा तनाव र आँखा दुखाइ को सबै भन्दा राम्रो नजर सुरक्षा र कम से कम रकम लागि, तपाईंको मनिटर कोठा मा एक प्रकाश स्रोत हेर्न हुँदैन.
यो कोठा को चमक मेल र प्रकाश स्रोत जस्तो हुँदैन.
100% गाढा कोठा मा चमक खराब छ?
र साथ 50% चमक, म पनि थप आँखा दुखाइ हुन सक्छ?
हो, तपाईंको मनिटर PWM प्रयोग भने.
आइरिस PWM प्रयोग बिना निगरानी चमक नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ.
म यसलाई चाहँदैनन्, अरू के?
सबै समय कोठा मा रोशनी गर्नुहोस् र अधिकतम चमक आफ्नो मनिटर प्रयोग.
म एक गाढा कोठा चाहनुहुन्छ, अरू के?
तपाईं झिलमिलाना-मुक्त वा आइरिस प्रयोग छ केही नयाँ मनिटर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ.
त्यसैले म अधिकतम चमक मा आइरिस प्रयोग गर्नुपर्छ?
कुनै, आइरिस चमक स्वस्थ छ र PWM प्रयोग गर्दैन.
तपाईं जे मूल्य तपाईं आइरिस संग चाहनुहुन्छ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर बटन तपाईँको मनिटर हार्डवेयर चमक मा हुन राम्रो छ 100%.
आदर्श, आफ्नो कोठा प्रकाश गर्न आइरिस संग चमक मेल.
त्यसैले म आइरिस सेट गरिएको छ भने आँखा दुखाइ प्राप्त हुनेछ 50% चमक?
आइरिस सेट गरिएको छ भने म आँखा दुखाइ प्राप्त हुनेछ 40% चमक?
आइरिस कम चमक सेट गरिएको छ भने म आँखा दुखाइ प्राप्त हुनेछ?
आफ्नो कोठा साँच्चै उज्ज्वल छ र आफ्नो मनिटर चमक तपाईं आँखा दुखाइ हुन सक्छ गाढा छ भने.
स्क्रिनको उज्यालोपना गर्न कोठा प्रकाश मेल गर्न प्रयास.
चमक सेट गरिएको छ भने 150% आइरिस देखि म कम झिलमिलाना प्राप्त हुनेछ?
यो कुनै पनि अन्य मूल्य जस्तै हुनेछ.
आइरिस हार्डवेयर परिवर्तन गर्न सक्दैन तर चमक नियन्त्रणमा जब PWM झिलमिलाना हटाउन सक्नुहुन्छ.
ब्याकलाइटद्वारा हर्ट्ज कम हुँदा त्यहाँ थप आँखा तनाव छ?
हो, तपाईं र बन्द र आफ्नो आँखा अनुबंध बीच बडा विश्रामहरू छन् थप.
हो, के तपाईं साँच्चै सानो विश्रामहरू छन् वा त्यहाँ प्रकाश मा बस कुनै विश्रामहरू छन् र आफ्नो आँखा अनुबंध छैन.
आँखा स्वास्थ्य को लागि हाम्रो लक्ष्य के हो?
मूलतः, हाम्रो लक्ष्य स्थिर प्रकाश स्तर छैन जो नेतृत्व वा एलईडी संग उच्चतम सम्भव हर्ट्ज दर संग सम्भव छ छ.
कम हर्ट्ज दर कोठा मा भएको लाइटबल्बमा खोल्दै जस्तै र सबै समय बन्द छ.
कुनै झिलमिलाना छ0हर्ट्ज आवृत्ति?
कुनै, हामी यो र बन्द झिलमिलाना कल.
मूलतः, मनिटर मा, तपाईं सबै भन्दा कम आँखा तनाव लागि सबैभन्दा ठूलो सम्भव हर्ट्ज लागि प्रयास.
ई-मसी मा, तपाईँ सँग छ0हर्ट्ज आवृत्ति तर प्रविधि फरक छ.
0 हर्ट्ज कुनै झिलमिलाना छ तर तपाईं कुनै पनि प्रकाश स्रोत यो कुरा हुन सक्दैन.
तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन्0पुस्तक वा रक जस्तै केही भौतिक वस्तुबाट हर्ट्ज.
मा दोधारमा छु, के गर्ने?
मनिटर बटनबाट अधिकतम आफ्नो मनिटर हार्डवेयर चमक सेट र चमक नियन्त्रण गर्न आइरिस प्रयोग.
म पूरै निगरानी अन्त्य गर्नुपर्छ?
राम्रो, यो सबै भन्दा राम्रो उपाय हो तर यो साँच्चै पूरै प्रविधि र विद्युतीय उपकरणहरू हाम्रो संसारमा कठिन छ.
राम्रो, दुवै बिजुली चार्ज वस्तुहरु आए तर त्यहाँ कुनै ठूलो जडान छ.
सबै मनिटर प्रयोग PWM के?
कुनै, तर तिनीहरूलाई धेरै, अन्य मनिटर डीसी मधुरो भनिन्छ कुरा प्रयोग.
डीसी मधुरो के हो?
बरु यो जस्तै चमक नियन्त्रण गर्न छोटो विश्रामहरू प्रयोग
तपाईं यस जस्तै डीसी परिवर्तन
र यो झिलमिलाना कारण छैन.
त्यसैले डीसी मधुरो झिलमिलाना छैन?
राम्रो, त्यहाँ छ subpixel झिलमिलाना र अन्य सामान सबै प्रकारका तर यो चमक नियन्त्रण गर्न PWM प्रयोग गर्दैन.
डीसी मधुरो PWM भन्दा राम्रो छ.
के आइरिस डीसी मधुरो जस्तै गर्छ?
हो, तर आइरिस भिन्नता एक बिट परिवर्तन डीसी मधुरो राम्रो छ त.
तथापि, तपाईं नयाँ मनिटर लागि पैसा धेरै खर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने छैन र स्वचालन चाहनुहुन्छ आइरिस राम्रो छ.
प्रयास आइरिस foracouple of days and see if it helps you with eye pain and sleep problems.
यदि होइन भने सधैँ यो संग हटाउन2क्लिक.
सीईओ आइरिस टेक्नोलजी
प्रकाशन मिति: 15.05.2018
पोस्ट लेख, PWM